Kufanele nazi lokhu ngaphambili kokuthenga E-skateboard - Jomo Technology Co., Ltd
Imuphi umbuzo okufanele kubhekwe? Yiqiniso Safety yayo. Ngakho, thina Koowheel skateboard kagesi umphakeli usuthole CE, RoHS, FCC UN38.3 izitifiketi. Njengengubo nje imoto noma ibhayisikili, lezi skateboard kagesi ngaphezu kwalokho kufanele kube kahle-zigcinwe ngenhloso ukusebenzisa bushelelezi. Uma kungenzeka akubukeki njenge zonke we skateboard kagesi ukuthi ozibone kuze kube manje. Lowomqondo efanayo manje kusebenza ngisho izinkinga ezifana nama-skateboard, evumela bemizimba ukwenza izinto abanye abakwazi ebhodini evamile, efana ugibele ekukhuphukeni. Ngu manje Ngingumfana ethile ukuthi uke ukuyichaza ukuthi lokhu skateboard ethize has a motor amancane ngaphakathi kwaso. Amabhethri Noma kunjalo, kubonakala sengathi kunjalo kube isici nokukhawulela ukuba inengi imfashini kagesi skateboard imiklamo. Ngaphambi kwalokho amakhasimende othole ukuthi skateboard yabo kagesi kungaba Kuphambene nomthetho uhambo emgwaqweni ukhansele oda langaphambili yabo. Roto-band skateboard umphakeli ( Koowheel brand) ozibiza akhanya, esheshayo, futhi iningi aphakeme skateboard kagesi emhlabeni. Lapha sinikeza nawe nge ezinye iziphakamiso sendlela ukwenza ukusetshenziswa skateboard kagesi ngokuphepha.
Kukhona ezinye ngempela cool skateboard kagesi emakethe futhi abambalwa babo ngempela Ngokuhlakanipha athuthukile. Kukhona nama-skateboard. Ibanga - Uma babuka ukusebenza noma ubuhlakani kuphela kuthatha imizuzu eyishumi ke akufanele ube nenkinga nalo kusukela skateboard kakhulu uzisibekele lokhu izindleko eyodwa. Isekelwe ngu skater oshomi ezimbili abaye sizimisele ukunikeza engcono skateboard kagesi kule planethi, Koowheel Amabhodi abaholi emkhakheni skateboard kagesi. Leli bhodi owenza ngokumangalisayo kahle isimo sezwe off-komgwaqo omkhulu, abaphatha izindaba ukuthi amabhodi esihlukile ayikwazi ngisho baphupha kalula. Ngokuvamile umuntu ezinkulu ukwehla kV motor kwanele, kwaba uma futhi climes yami amagquma kahle kakhulu futhi kuyisinqumo esingcono eshibhile. Kuyini abakufakaza ngawe laba ukucabangela ngaphambili kuka ukuthenga eyodwa? kuba esheshayo skateboard kagesi , liphinde mnene kakhulu. Can kanjani kungcono omnene ngakho? Kungase mhlawumbe ukufinyelela ijubane-30 km / h futhi kanye battery pack replaceable, 2pcs ibhethri amaphakethe ingahlala 60km, hamba eside.
Yini kuyindlela ephumelelayo ukunquma omunye engcono skateboard kagesi ukuze nabagibeli, izingane kanye nabantu abadala? Enye Spec ekutshela lokhu skateboard kagesi kuhloswe abadala iyona ukalwe okukhipha zamandla motor. Kuyinto skateboard electronic ukuthi uyonikezwa motor kagesi esetshenziswa okude. I akude Kulula kakhulu ukusebenzisa, Nokho kungcono eqondile ukusebenza. I-asebenziseka kalula ukuphathwa ezikude imvumo ukusheshisa lula - ngisho kusho ukuthi ungakwazi bayeke imodi nasemuva!